मलेसिया सरकारले बढायो कामदारको पारिश्रमिक, कति पुग्यो ? -
Homeसमाचारमलेसिया सरकारले बढायो कामदारको पारिश्रमिक, कति पुग्यो ?
November 3, 2018 Spnews समाचार 0
मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारहरुको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै मलेसियाली अर्थमन्त्री लिम ग्वान ईङले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
मलेसियामा बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ । तर कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिप्रति सहमत छैनन् । मलेसियाले हरेक दुई दुई वर्षमा ‘न्युनतम पारिश्रमिक नीति’ मा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ ।
कति पुग्यो ?
नेपाल आइडलका बुद्द लामाको आवाजमा आयो नया गीत (हेर्नुहोस् भिडियो)
जापानले दियो विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षे भिषा, यस्तो छ नयाँ नियम
आज सुनको भाउ घट्यो, कति पुग्यो ?
July 24, 2018 Spnews समाचार 0
काठमाडौँ : आज (मंगलबार) सुनको मूल्य तोलामा दुई सय रुपैयाँले घटेको छ । आज सुन ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । तेजावी सुन ५६ हजार […]
आज सुनको मुल्यमा बृद्धि, कति पुग्यो ?
April 3, 2018 Spnews अर्थ/वाणिज्य, समाचार 0
काठमाडौं । सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ३ सय रुपैयाँ बृद्धि भएको छ । सुन आज तोलाको ५८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार ५७ हजार ९ सय […]